पार्टी फुटाउनुअघि प्रचण्ड-माधवबीच लिखित संझौता भएको खुलासा, यस्तो रैछ खेल माधवको बाचा ,!!! – News Nepali Dainik
पार्टी फुटाउनुअघि प्रचण्ड-माधवबीच लिखित संझौता भएको खुलासा, यस्तो रैछ खेल माधवको बाचा ,!!!
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ०४, २०७७ समय: १७:५५:४१
माघ### सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले तात्कालिन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीसँग पराजीत हुनुपरेको बदला नेकपामाथि लिएको स्वीकार गर्नुभएको छ । नेता नेपालले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको अस्थीर स्वभावलाई उपयोग गरी अर्काे महाधिवेशनसम्म पुग्नै नदिई केपीलाई हारको बदला लिएको आफू निकटहरुलाई बताउनु भएको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले माधवसँग कुरा गर्दा सतर्क रहन आफू निकट सवैलाई भनेका छन । माधवले ओलीसँगको धेरै कुराकानी आफूलाई रेकर्ड गराएर सुनाएको भन्दै माधवसँग हिमचिम धेरै नगर्न आफू निकट नेताहरुलाई भन्नुभएको हो । जनताटाइम्सबाट साभार
Last Updated on: January 17th, 2021 at 5:55 pm